Fluoxymesterone vovoka (76-43-7) Mpanao & Mpamatsy - Factory
Vola Fluoxymesterone roah (76-43-7)
Fluoxymesterone vovoka (76-43-7) dia androgen synthetic, na hormone lahy, mitovy amin'ny testosterone. Ny Fluoxymesterone dia miasa amin'ny fifehezana ny mpanolo-tsaina androgen; Izany dia mahatonga azy io hifaneraserana amin'ireo ampahan'ny sela voarakotra amin'ny fanaovana proteinina. Mety hampitombo ny fampiasana proteinina sasany izany na ny fihenan'ny famolavolana ny hafa. Ireo proteinina ireo dia manana fiantraikany isan-karazany, anisan'izany ny fanakanana ny fitomboan'ny karazana sela avy amin'ny sela, ny famporisihana ny sela izay mahatonga ny lahy sy ny lahy ho lahy, ary ny fanentanana ny sela mena.
Vovonan'ny fluoxymesterone roahina (76-43-7) video
Vola Fluoxymesterone roah (76-43-7) Description
Ny vovony Fluoxymesterone Rao dia karazana testosterone, nataon-tanana mahazatra ny lahy sy vavy voan'ny aretina azo avy amin'ny taovam-pananahana. Ny testosterone kely ihany koa dia novolavolaina tamin'ny oviana sy ny rafitrano adrenalin'ny vehivavy.
Ny volo fluoxymesterone dia miasa amin'ny fifehezana ny mpanolo-tsaina androgen; Izany dia mahatonga azy io hifaneraserana amin'ireo selan'ny sela voarakitra amin'ny fanaovana proteinina. Mety hampitombo ny fampiasana proteinina sasany izany na ny fihenan'ny famolavolana ny hafa. Ireo proteinina ireo dia manana fiantraikany isan-karazany, anisan'izany ny fanakanana ny fitomboan'ny karazana sela avy amin'ny sela, ny fampiroboroboana sela izay mahatonga ny lahy sy ny lahy ho lahy, ary ny fanentanana ny sela mena.
Ny vovony Fluoxymesterone ra dia ampiasaina amin'ny lehilahy izay tsy ampy ny voa ara-voajanahary antsoina hoe testosterone. Amin'ny lehilahy, testosterone dia tompon'andraikitra amin'ny andraikitra mahazatra, anisan'izany ny fivoarana sy ny fivoaran'ny taova, ny hozatra ary ny taolana. Manampy amin'ny fitomboan'ny fampandrosoana ara-dalàna (fahamaotinana) amin'ny ankizilahy ihany koa izany. Ny vovony Fluoxymesterone dia mitovitovy amin'ny testosterone voajanahary novokarin'ny vatanao. Anisan'ny kilasin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe androgens izany. Izy io dia miasa amin'ny fiantraikany amin'ny rafitra maro ao amin'ny vatana mba hahafahan'ny vatana mandroso sy miasa araka ny tokony ho izy.
Ny vovony Fluoxymesterone ra ihany koa dia azo ampiasaina ao amin'ny ankizilahy manambady sasany mba hahatonga ny fahaleovan-tena ho an'ireo izay manana fahantrana.
Voangona fluoxymesterone roah (76-43-7) Specifications
Product Name Vokatry ny fluoxymesterone ra
Anarana simika Fluoximesterone, Fluoxymestrone; Halotestin; Androfluorene
molekiolan'ny Formula C20H29FO3
molekiolan'ny Wvalo 336.447 g / mol
mitsonika Point 265 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 9.2hours
Application 1. ampiasaina ao amin'ny lehilahy izay tsy ampy ny zavatra voajanahary antsoina hoe testosterone.
2. manampy amin'ny fitomboan'ny fivoarana ara-dalàna (fahamaizinana) amin'ny ankizilahy.
WNy hate dia rojo Fluoxymesterone (76-43-7)?
Ny voankazo Fluoxymesterone ihany koa, ny poofa Halotestin dia steroid anabolic androgenic izay azo nalaina am-bava nataon'ireo bodybuilders mba hampirisihana ny fitomboan'ny voan'ny muscle. Izy io dia tonga amin'ny isa telo - 2mg, 5mg ary 10mg - ary misy karazan-tsakafo tsy mavitrika, toy ny stearate calcium, ny tainkiron'ny varimbazaha, lactose, asidra sorbika ary tragacanth (hanonona anarana vitsivitsy).
Io hormonina io dia mitovy amin'ny testosterone izay mitranga ao amin'ny vatanao, noho izany dia tsy mahagaga raha ampiasain'ny lehilahy izay tsy mamokatra testosterone ampy tsara (na tovolahy tanora mijaly noho ny fahamaotiana). Amin'ny fampiasana poofa Halotestin, dia afaka manampy ny hozanao, ny taolana sy ny fanananao ny fiterahana ny fahasalamana, ary ny fisorohana ny ratra amin'ny hozatra.
Ahoana ny vovo-dronono Fluoxymesterone (76-43-7) asa
Ny hormones dia zavatra simika izay novokarin'ny sela ao amin'ny vatana, izay miditra amin'ny rà ary mampisy fiantraikany amin'ny teboka hafa. Ny fampiasana fitsaboana hormonina ho entina homamiadana dia mifototra amin'ny fijerena fa ny mpitsabo amin'ny hormonina manokana izay ilaina amin'ny fitomboan'ny sela dia eo amin'ny tandroka sela sasany. Ny fitsaboana amin'ny hormone dia afaka miasa amin'ny fijanonana ny famokarana hormone iray, fanakanana ny mpikatroka hormonina, na ny manolo ireo mpikatroka simika ho an'ny hormone mivaingana, izay tsy azo ampiasaina amin'ny sela mpikatroka. Ny karazana fitsaboana hormone isan-karazany dia sokajiana amin'ny asany sy / na ny karazana hormone izay natao.
Ny vovoka Fluoxymesterone dia sokajiana ho androgen. Ny androgen dia hormones toy ny testosterone sy androsterone izay mamokatra na manentana ny fampandrosoana ny toetran'ny lehilahy. Ao amin'ny vehivavy, ireny hormones ireny dia afaka mivadika ho estrogen. Androgana toy ny fitsaboana kansera no ampiasaina hanohitra ny asan'ny estrogen, ka mahatonga ny fihomboan'ny homamiadana.
Volo fluoxymesterone roitso (76-43-7) Dosage
Ny dosage dia hiova arakaraky ny olona, ​​ny toe-java-misy ary ny fahasarotany. Ny dose isan'andro dia azo atao na amin'ny fizarana (telo na efatra) doses.
Lehilahy hôhagôgadia: Ho solon'ny fanoloana tanteraka ny lehilahy hypogonadal, dia ampy ny dosie 5 amin'ny 20 mg isan'andro amin'ny ankamaroan'ny marary. Tsara kokoa ny manomboka ny fitsaboana miaraka amin'ny dosage feno fitsaboana izay ampifanarahana amin'ny olona tsirairay. Ny Priapisme dia manondro ny dosage tafahoatra ary manondro ny fandroahana ny rongony.
Faharetan'ny fahamaotiana: Tokony hozaraina tsara ny dosage amin'ny fampiasana diplaoma ambany, fanarahamason'ny skeleta mety, ary amin'ny famerana ny fotoana fitsaboana mandritra ny efatra hatramin'ny enim-bolana.
Karazam-bozaka tsy mety ampiasaina amin'ny tratra ao amin'ny vehivavy: Ny dose isan'andro voatery voatondro ho fitsaboana fanafody amin'ny karnôsoma tsy azo ampiasaina amin'ny tratra dia 10 amin'ny 40 mg. Noho ny fihetsika fohy ataony, ny fluoxymesterone dia tokony halefa amin'ny marary amin'ny fizarana, fa tsy ny singa tsirairay isan'andro, mba hahazoana antoka bebe kokoa ny tahan'ny ra. Amin'ny ankapobeny, toa tsy maintsy ilaina ny manohy fitsaboana mandritra ny iray volana farafahakeliny noho ny valiny mahafa-po, ary mandritra ny roa na telo volana amin'ny valinteny mazava.
Vola Fluoxymesterone roah (76-43-7) fampiasana
Ity fanafody ity dia ampiasaina amin'ny lehilahy izay tsy ampy ny voa ara-voajanahary antsoina hoe testosterone. Amin'ny lehilahy, testosterone dia tompon'andraikitra amin'ny andraikitra mahazatra, anisan'izany ny fivoarana sy ny fivoaran'ny taova, ny hozatra ary ny taolana. Manampy amin'ny fitomboan'ny fampandrosoana ara-dalàna (fahamaotinana) amin'ny ankizilahy ihany koa izany. Ny vovony Fluoxymesterone dia mitovitovy amin'ny testosterone voajanahary novokarin'ny vatanao. Anisan'ny kilasin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe androgens izany. Izy io dia miasa amin'ny fiantraikany amin'ny rafitra maro ao amin'ny vatana mba hahafahan'ny vatana mandroso sy miasa araka ny tokony ho izy.
Azo ampiasaina amin'ny tovovavy sasany ny fluoxymesterone mba hahatonga ny fahamaotiana ho an-janany.
Buy Vardenafil Fluoxymesterone avy amin'ny Buyaas.com